Cabdi Xaashi oo kusoo baxay doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee gobollada waqooyi, Somaliland : Calanka.com
Cabdi Xaashi oo kusoo baxay doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee gobollada waqooyi, Somaliland
Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa noqday Senator-kii ugu horreeyayay ee Aqalka Sare ee gobollada Waqooyi, kaddib markii uu u tanaasulay musharraxii la tartamayay oo ahaa Siciid Cumar Xuseen.
Guddoomiyaha guddiga doorashada gobollada Waqooyi Khadar Xariir Xuseen ayaa ergada u gudbiyay inay si gacantaag ah ugu codeeyaan, sida uu qabo habraaca doorashada, waxaana ansixiyay 44, halka laba ka mid ah ka aamuseen, waxaana natiijadani ka dhigantahay in mar kale dib loo doortay Cabdi Xaashi oo afartii sano ee la soo dhaafa ahaa gudoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xarunta Afisyooni oo ay doorashadan ay ka dhexeyso waxaa ammaankeeda sugaya ciidamada booliska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, waxaana goobjoog ka ah saraakiil ka socota xaafiiska Ra’isul Wasaaraha, guddiga doorashada heer Federaal iyo kuwa beesha Caalamka oo uu horkacayo Ergayga gaar ah ee Qaramada Midoobe arrimaha Somalia James Swan.
Doorashada shanta kursi ee kale ee maanta la dooranayo ayaa hadda la guda galay.
Halkan ayaad kala socon doontaan natiijada ku soo kororta doorashadan.